यति छिट्टै रणवीर बने टुहु`रो, यस्तो थियो बुवा ऋ`षिको अन्तिम इच्छा !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/यति छिट्टै रणवीर बने टुहु`रो, यस्तो थियो बुवा ऋ`षिको अन्तिम इच्छा !!
भारतका एक प्रख्यात अभिनेता ऋषि कपूरको ६७ वर्षको उमेरमा बिहीवार बिहान नि`धन भएको छ। मङ्गलवार स्वा`स्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई मुम्बईको एचएन रिलायन्स फाउन्डेसन अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। ऋषि कपूरका दाइ रणधीर कपूरले उनको निध`न भएको पु`ष्टि गरेका छन्। बुधवार भारतमा क्यान्सरसँग जुधिरहेका
अर्का प्रख्यात अभिनेता इरफान खानको निध`न भएको थियो। बुधवार रणधीर कपूरले भनेका थिए, “ऋषि अस्पतालमा क्या`न्सरसँग जुधि`रहेका छन्। उनलाई सास फेर्न समस्या भइरहेको थियो। त्यसपछि उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो।”फेब्रुअरीमा पनि ऋषि कपूरलाई दुई`पटक अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। ऋषि कपूर कलाकार राज कपूरका दोस्रो सन्तान हुन्।
रणधीर कपूर, ऋतु नंदा, रिमा जैन र राजीव कपूर ऋषि कपूरका दाजुभाइ र दिदीबहिनी हुन्। ऋषि कपूरले आफ्नो फिल्मी करिअरको शुरूवात १९७३ मा बबी फिल्बाट गरेका थिए। यसबाहेक उनी बाल कलाकारको रूपमा श्री ४२० र मेरा नाम जोकर मा पनि देखिएका थिए। ऋषि कपूरले इमरान हाश`मीसँग अन्तिम फिल्म द बडीमा काम गरेका थिए।उनले आफ्नो अर्को फिल्म दीपिका पादुकोण सँग हुने घोषणा गरेका थिए।यो फिल्म हलिउड फिल्म द इन्टर्नको रिमेक हो। ऋषि कपूर विगत दुइ वर्षदेखि क्या`न्सरसँग लडाइ गरिरहेका थिए। सन् २०१८ मा ऋषि कपूर क्या`न्सरको उपचारका लागि अमेरिकाको न्यूयो`र्क गएका थिए।
बलिउड अभिनेता रणवीर कपुर र अभिनेत्री आलिया भ`ट्टको प्रेम दुवैको परिवारमा पनि स्वीकार्य भइसकेको थियो । रणवीरका बाबु ऋषि कपुरले त आलियालाई चाँडो भन्दा चाँडो बुहारी बनाएर भित्र्या`उने चाहना प्रकट गरेका थिए । तर उनको चाहान अधु`रो नै र`ह्यो । अबिबा`हित रण`वीर टुहुरो बने । एक अन्तर`वार्तामा ऋषिले भनेका थिए, ‘मैले २७ वर्षको उमेरमा नै बिहे गरि`सकेको थिएँ । रणवीर त ३७ वर्ष पुगि`सक्यो । म चाहन्छु उसले चाँडो भन्दा चाँडो बिहे गरोस् ताकि मर्नुभन्दा अगाडि नाति नातिना खेलाउन पाइयोस् ।’
संसारभर रोजगारमा कटौती, विदेशीएका नेपाली फर्किनु परे के होला ??
पेटमा बच्चा छैन भने पछि नवराजका आमा र बहिनि आक्रो श हुँदै भने, औसधि खुवाएर फाले, तुरुन्तै परि क्षण हुनुपर्छ !!